Sikulungele ukuya ethekweni kwakhona: Intengiso yeChampagne iseta iirekhodi ezintsha
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iiwayini kunye neMimoya » Sikulungele ukuya ethekweni kwakhona: Intengiso yeChampagne iseta iirekhodi ezintsha
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Culinary • inkcubeko • Iindaba zaseFransi ezaphulayo • Iindaba zeLuxury • iindaba • abantu • Shopping • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iiwayini kunye neMimoya
Sikulungele ukuya ethekweni kwakhona: Ukuthengisa kweChampagne kuseta iirekhodi ezintsha.
Indibano yangoku kwiimarike zechampagne zehlabathi zinokunyusa ukuthengisa kwiibhotile ezizizigidi ezingama-305 kwihlabathi liphela ngo-2021, inani eligqitywe ukubonwa ngo-2017.
Udidi lweChampagne lwehle phantse ngeepesenti ezili-18 kulo nyaka uphelileyo emva kokuhla kwe-2% ngo-2019.
Ngokusekwe kunyuso lwangoku, ukuthengiswa kwe-champagne kulindeleke ukuba kukhule malunga ne-4% kulo nyaka, kwaye kuqhubeke umkhondo nge-2025.
Ukuthengiswa kweChampagne phakathi kukaJanuwari no-Agasti kunyuke nge-11.9%, xa kuthelekiswa nexesha elifanayo kubhubhane ka-2019.
Ngokutsho kweFrench champagne abalimi be wayini bangena kulobby SGV, Ishampeyini Iintengiso zisendleleni yokufikelela kwinqanaba eliphezulu leminyaka emine kulo nyaka, ngenxa yokukhula kwempahla ethunyelwa ngaphandle e-United States nase-Australia.
Iintengiso ezibhetyebhetye ziyenyuka, zibuyela kumthamo wokugqibela wabonwa ngaphambi kobhubhani we-coronavirus yehlabathi kunye nokuvalwa okuthe kwalandela kwathumela ukwehla kweentengiso, njengoko abantu babevaliwe ukuba bagibe.
Ishampeyini intengiso phakathi kukaJanuwari no-Agasti inyuke phantse nge-12%, xa kuthelekiswa nexesha elifanayo kubhubhani wangaphambi kuka-2019.
Ngelo xesha, izindlu ze-champagne zaseFransi zathumela iibhotile ezizigidi ezingama-297.6 kwihlabathi jikelele. Ngo-2020, nangona kunjalo, lo mmandla wathumela ngaphandle kuphela iibhotile ezizigidi ezingama-244, ngokwedatha evela kumbutho wezorhwebo weComité Champagne. Ingeniso yecandelo, elilelona lizwe liphezulu kushishino lokuthumela ngaphandle eFrance emva kweAeronautics, ibonakalise ilahleko kwinzuzo yeedola ezingama-980 ezigidi.
"Uluhlu beluhle phantse nge-18% kulo nyaka uphelileyo emva kokuhla kwe-2% ngo-2019," umhlalutyi ovela e-UK esekwe kwiWine kunye neRekhodi yeMimoya (IWSR) uxelele i-CNBC, ecaphula amanani eqela lentengiso yeZiselo. Ngoku, ngokusekwe kunyuso lwangoku, inkampani ilindele Ishampeyini iintengiso zikhule malunga ne-4% kulo nyaka, kwaye ziqhubeke nendlela nge-2025.
Uqikelelo lweFrance General Syndicate yeChampagne Winegrowers inethemba ngakumbi. Eli qela lilindele ukuba indibano yangoku kwiimarike zechampagne zehlabathi ingaqhubela ukuthengisa kwiibhotile ezizizigidi ezingama-305 kwihlabathi liphela ngo-2021, inani eligqibele ukubonwa ngo-2017.
Ezinye iingcali zikholelwa ukuba abantu bakulungele ukwenza itheko kwakhona emva kokuchitha ngaphezulu konyaka bevaliwe.
"Ukuba kufuneka ndiqikelele, ndicinga ukuba abathengi bakulungele ukubhiyozela kwanezinto ezincinci ebomini," uNatalie Pavlatos, isithethi se-Champagne Bureau e-US, uxelele i-CNBC. Ngelixa ixesha leholide liseza, uPavlatos uqaphele ukuba i-ofisi yakhe sele ifumana iingxelo zentengiso ephezulu kunamanqanaba alo nyaka uphelileyo.
“Ke ngoko sinokubona kungekuphela nje ukubuya kwesiqhelo kodwa nokusebenza ngcono kunoko besinako ngo-2019,” utshilo uPavlatos.